Qoritaanka shuruudaha: maxay yihiin? - Tababarka garashada
Qoritaanka shuruudaha: maxay yihiin?
Macnaha guud ee daaweynta cilladaha gaarka ah ee waxbarashada, door gaar ah ayaa laga ciyaaraa waxa loogu yeero shuruudaha. Shuruud hore waa xirfad ama aqoon naga caawisa inaan horumarino xirfad ama aqoon dambe. Maxay muhiim u tahay in la aqoonsado shuruudaha hore? Sababtoo ah waxay noo ogolaaneysaa inaan shaqeyno kahor intaan xirfad la soo bandhigin, sidaas awgeed waxay na siineysaa waqti dheeri ah iyo malaha fursad badan oo aan ku guuleysano Aynu ka fikirno tusaale ahaan reading: suurtagalnimada in laga shaqeeyo wax aan ahayn aqrinta, ma taasi waxay naga caawineysaa inaan kor u qaadno horumarka akhriska, waxay noo ogolaaneysaa inaan horey u soo dhex galno xanaanada.
Nasiib darrose, had iyo jeer, kuwa loo iibiyo shuruud ahaan badanaa "kaliya", marka laga eego aragtida cilmi-baarista, ee saadaaliyayaasha. Ficil ahaan, waa xirfado tirakoob ahaan laxiriira xirfadaha xiga, sidaa darteedna waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo fikrado ku saabsan sida xirfad u horumarto iyo in kale. Weli mawduuca akhriska, madaahibta dhaqsaha badan waxaa loo arkaa inay tahay saadaaliye wanaagsan oo aqrinta: anigoo fiirinaya xirfadaha magac-bixinta degdegga ah ee carruurta, waxaan ku qiyaasi karaa kartidooda akhris ee xigta iyadoo ay saxsan tahay. Si kastaba ha noqotee, hagaajinta magacaabista degdegga ah lagama yaabo inay hagaajiso akhriska!
Maqaalka 2011 oo aad si xor ah ugala tashan karto halkan, Purakin iyo asxaabtiisuba  waxay isku dayeen inay aqoonsadaan xirfadahaas karti u leh Saadaali xirfadaha qorista ee soo socda sida xanaanada. Gaar ahaan waxay falanqeeyeen:
Aqoonta alifbeetada: magac bixinta xarfaha ama tilmaamidda eray ka bilaabmaya ...
Xirfadaha metaphonological: isku dhafka iyo u kala qaybinta qoraalka
Aqoonta "macnaha" qoraalka (aqoonta daabacan): magacyada sumadaha badeecada, waxa qorista loogu talo galay, waxa wargeys loogu talo galay, iwm.
Qorista 3 xaraf erey (CVC sida "ey", "cat")
Ku saabsan qoritaanka magaca, isla qorayaashu sidoo kale waxay isku dayeen inay raadiyaan xiriir ka dhexeeya dhererka magaca ilmaha iyo awooddiisa qoris: Qiyaas ahaan, maaddaama ay carruurtu bartaan qorista magacyadooda goor hore, carruurta leh magacyo dhaadheer waxay garanayeen xarfo badan, sidaas darteedna waxay ugu fiicnaan karaan qorista. Daraasadu, si kastaba ha ahaatee, ma aysan xaqiijin male-awaalkan.
Daraasadu waxay ogaatay in labada arimood ee ugu waxtarka badan saadaalinta xirfadaha qorista ee soo socda ay ahaayeen:
Aqoonta "macnaha" qoraalka
Awoodda qorista waraaqaha
Waxay u egtahay wax qariib ah, laakiin sarbeebtu uma muuqato inay door muhiim ah ka ciyaareyso. Waxay u muuqan kartaa mid aan caqiido lahayn, marka la eego in qorista dhab ahaan la sameeyo ugu yaraan iyada oo loo kala qaybiyo ereyga loo yaqaan 'grapheme' oo loo yaqaan 'grapheme'. Si kastaba ha noqotee, xitaa daraasadaha Talyaaniga ayaa hadda xaqiijinaya doorka aan udub dhexaadka u ahayn qaybta sarbeebta.
Marka la eego, waxaan kugula talineynaa maqaalkeena carruurta hadalka xun, laakiin si fiican wax u qora.
Sidoo kale way ku xiisi kartaa
GameCenter Writing: qoraalkeena bilaashka ah ee barnaamijyada
Koorsadeena fiidiyow ee asynchronous "Xoojinta qoraalka" (65 €)
Waa maxay cudurka loo yaqaan 'dysorthography'
Xaashidayada xaqiiqda bilaashka ah ee akhriska, qorista, xisaabinta, luqadda, u fiirsashada iyo howlaha fulinta
 Puranik, Cynthia & Lonigan, Christopher & Kim, Young-Suk. (2011). Ku darsiga Xirfadaha Akhris-qorista degdegga ah ee loogu magac daray Qorista, Qorista Waraaqda, iyo Higaadda ee Carruurta Dugsiga-barbaarinta. Cilmi-baarista carruurnimada hore saddexdii biloodba. 26, 465-474.
dysorthography, layli higaada, metaphonology, shuruudaha sarbeebta ah, qorista shuruudaha
Qoritaanka shuruudaha: maxay yihiin?2020-11-042020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/journal-2850091_1280.jpg200px200px
Dhakhtarka hadalka hadalka Antonio Milanese
Khudbad-yaqaanka hadalka iyo barnaamijka kombiyuutarka oo dano gaar ah ka leh barashada. Waxaan sameeyay dhowr barnaamijyo iyo barnaamijyo websaydh ah waxaanan baray koorsooyin ku saabsan xiriirka ka dhexeeya daaweynta hadalka iyo teknolojiyada cusub.
Waddo kor loogu qaado akhriska iyada oo loo marayo magacaabista degdegga ahDSA, Daaweyn
Awoodsiinta Qoraalka: Koorsada tooska ah ee 'Asynchronous Online' oo ku saabsan higgaadintaDSA